Search ပွနျလမျးမဲ့ကြှနျး 2017 - BajarFB.com
Search Results - ပွနျလမျးမဲ့ကြှနျး 2017
Ode To Gallantry (2017) 03 ပွနျလမျးမဲ့ကြှနျး CRD>>>M&F စဆုံးလငျ့ https://m.facebook.com/events/585501685969637?view=permalink&id=585503085969497
Ode To Gallantry (2017) 03 ပွနျလမျးမဲ့ကြှနျး CRD>>>M&F စဆုံးလငျ့ https://m.facebook.com/events/585501685969637?view=permalink&id=585503085969497 Mike Dann 24 Sep
Ode To Gallantry (2017)🇨🇳 ပွနျလမျးမဲ့ကြှနျး သိုငျးကားစဈစဈ 🐉🐲 ပွနျကွညျ့ခငျြသူမြားအတှကျ အောကျမှာLink👇 https://m.facebook.com/events/585501685969637?view=permalink&id=585503085969497 #Crd
Ode To Gallantry (2017)🇨🇳 ပွနျလမျးမဲ့ကြှနျး သိုငျးကားစဈစဈ 🐉🐲 ပွနျကွညျ့ခငျြသူမြားအတှကျ အောကျမှာLink👇 https://m.facebook.com/events/585501685969637?view=permalink&id=585503085969497 #Crd Thike Chań 20 Oct · 86K views
Ode To Gallantry (2017) 05 ပွနျလမျးမဲ့ကြှနျး CRD>>>M&F စဆုံးလငျ့ https://m.facebook.com/events/585501685969637?view=permalink&id=585503085969497
Ode To Gallantry (2017) 05 ပွနျလမျးမဲ့ကြှနျး CRD>>>M&F စဆုံးလငျ့ https://m.facebook.com/events/585501685969637?view=permalink&id=585503085969497 Mike Dann 24 Sep
ပြန်လမ်းမဲ့ကျွန်း အပိုင်း (၁ )၂၀၁၇ မြန်မာစာတန်းထိုး ပင်​လယ်​ပြင်​ကြီးထဲမှာ ​ရှေးကျတဲ့ကျွန်းကြီးတစ်​ကျွန်းရှိတယ်​ ဒီကျွန်းကြီး​ပေါ်မှာ အမည်​​ဖော်​လို့မရတဲ့လျှို့ဝှက်​ချက်​​တွေအများကြီး ရှိ​နေပါတယ်​.. ကျွန်းကြီးရဲ့နာမည်​က "သူရဲ​ကောင်းကျွန်း" လို့အမည်​တွင်​ပါတယ်​ ..... နှစ်​စဉ်​ ဆယ်​နှစ်​ပြည့်​တိုင်း ကျွန်း​ပေါ်မှာရီတဲ့ တမာန်​​တော်​ နှစ်​​ယောက်​က ​ရွှေ​ရောင်​​ကြေးပြားတံဆိပ်​​လေးကို သိုင်း​လောကထဲက ဂိုဏ်းအသီးသီးဆီကို လိုက်​ပို့ပြီး ဆယ်​နှစ်​လပိုင်း ​ရောက်​ရင်​ ကျွန်း​ပေါ်မှာ ဆန်​ပြုတ်​လာစားကြဖို့ ဖိတ်​ကြားခဲ့ပါတယ်​......... ​ရွှေ​ရောင်​​ကြေးပြားတံဆိပ်​နဲ့ ဖိတ်​​ကြားခြင်းခံရပြီး ​ရောက်​မလာခဲ့တဲ့ သိုင်းဂိုဏ်း​တွေကို တစ်​ဂိုဏ်းလုံး အမြစ်​ပါမကျန်​​အောင်​ ဘာအ​ကြောင်း ပြချက်​မှ မ​ပေးပဲ သုတ်​သင်​ဖယ်​ရှားပစ်​ကြပါတယ်​ ​ကြွ​ရောက်​လာခဲ့တဲ့ ဂိုဏ်းအသီးသီးက သိုင်းသမား​တွေအားလုံး လုံးဝသတင်းအစအန မကျန်​ခဲ့ပဲ ​ပျောက်​ဆုံးကုန်​ပါ​တော့တယ်​ သူတို့​တွေအားလုံး ဘယ်​ကို​ရောက်​ကုန်​ကြတာလဲ ? ​သေသွားကြတာလား ? အသက်​ရှင်​​သေးရဲ့လား? ဘယ်​လိုကြမ္မာဆိုးမျိုး ကြုံသွားကြရတာလဲ? ..... အ​ဖြေမရှိတဲ့​မေးခွန်း​တွေနဲ့ သိုင်း​လောကသား​တွေက သူရဲ​ကောင်းကျွန်းကြီးကို အသက်​စ​တေးဖို့အတွက်​ လာရတဲ့ ပြန်​လမ်းမဲ့ကျွန်း ကြီးအဖြစ်​ ​ခေါ်​ဝေါ်သမုတ်​ကြပါ​တော့တယ်​ ......... ..... Translated by Nay Nay(ဦး​နေ) Encoded by မာမီပြည့်​ (PPT) #သိုင်းကားများနှင့်ထာဝရသိုင်းသမားလေး..... Page မှကူးယူတင်ဆက်သည်
ပြန်လမ်းမဲ့ကျွန်း အပိုင်း (၁ )၂၀၁၇ မြန်မာစာတန်းထိုး ပင်​လယ်​ပြင်​ကြီးထဲမှာ ​ရှေးကျတဲ့ကျွန်းကြီးတစ်​ကျွန်းရှိတယ်​ ဒီကျွန်းကြီး​ပေါ်မှာ အမည်​​ဖော်​လို့မရတဲ့လျှို့ဝှက်​ချက်​​တွေအများကြီး ရှိ​နေပါတယ်​.. ကျွန်းကြီးရဲ့နာမည်​က "သူရဲ​ကောင်းကျွန်း" လို့အမည်​တွင်​ပါတယ်​ ..... နှစ်​စဉ်​ ဆယ်​နှစ်​ပြည့်​တိုင်း ကျွန်း​ပေါ်မှာရီတဲ့ တမာန်​​တော်​ နှစ်​​ယောက်​က ​ရွှေ​ရောင်​​ကြေးပြားတံဆိပ်​​လေးကို သိုင်း​လောကထဲက ဂိုဏ်းအသီးသီးဆီကို လိုက်​ပို့ပြီး ဆယ်​နှစ်​လပိုင်း ​ရောက်​ရင်​ ကျွန်း​ပေါ်မှာ ဆန်​ပြုတ်​လာစားကြဖို့ ဖိတ်​ကြားခဲ့ပါတယ်​......... ​ရွှေ​ရောင်​​ကြေးပြားတံဆိပ်​နဲ့ ဖိတ်​​ကြားခြင်းခံရပြီး ​ရောက်​မလာခဲ့တဲ့ သိုင်းဂိုဏ်း​တွေကို တစ်​ဂိုဏ်းလုံး အမြစ်​ပါမကျန်​​အောင်​ ဘာအ​ကြောင်း ပြချက်​မှ မ​ပေးပဲ သုတ်​သင်​ဖယ်​ရှားပစ်​ကြပါတယ်​ ​ကြွ​ရောက်​လာခဲ့တဲ့ ဂိုဏ်းအသီးသီးက သိုင်းသမား​တွေအားလုံး လုံးဝသတင်းအစအန မကျန်​ခဲ့ပဲ ​ပျောက်​ဆုံးကုန်​ပါ​တော့တယ်​ သူတို့​တွေအားလုံး ဘယ်​ကို​ရောက်​ကုန်​ကြတာလဲ ? ​သေသွားကြတာလား ? အသက်​ရှင်​​သေးရဲ့လား? ဘယ်​လိုကြမ္မာဆိုးမျိုး ကြုံသွားကြရတာလဲ? ..... အ​ဖြေမရှိတဲ့​မေးခွန်း​တွေနဲ့ သိုင်း​လောကသား​တွေက သူရဲ​ကောင်းကျွန်းကြီးကို အသက်​စ​တေးဖို့အတွက်​ လာရတဲ့ ပြန်​လမ်းမဲ့ကျွန်း ကြီးအဖြစ်​ ​ခေါ်​ဝေါ်သမုတ်​ကြပါ​တော့တယ်​ ......... ..... Translated by Nay Nay(ဦး​နေ) Encoded by မာမီပြည့်​ (PPT) #သိုင်းကားများနှင့်ထာဝရသိုင်းသမားလေး..... Page မှကူးယူတင်ဆက်သည် Ye Htay 13 Jul 2018 · 15K views
Ode To Gallantry (2017) 04 ပွနျလမျးမဲ့ကြှနျး CRD>>>M&F စဆုံးလငျ့ https://m.facebook.com/events/585501685969637?view=permalink&id=585503085969497
Ode To Gallantry (2017) 04 ပွနျလမျးမဲ့ကြှနျး CRD>>>M&F စဆုံးလငျ့ https://m.facebook.com/events/585501685969637?view=permalink&id=585503085969497 Mike Dann 24 Sep
ပွနျလမျးမဲ့ကြှနျး အပိုငျး1 Than Swe 21 May · 304 views